Banyere Anyị - FUJIAN YUANHUA mgbapụta ụlọ ọrụ CO., LTD
Fujian YUANHUA mgbapụta ụlọ ọrụ CO., LTD
Anyị bụ ụlọ nrụpụta nke kwenyere na ike dị ukwuu.
Fujian YUANHUA mgbapụta ụlọ ọrụ CO., LTD guzobere na Fujian na 2009, nke bụ a kpam kpam ekesịghị enyemaka nke PEAKTOP Group depụtara na Hong Kong (SEHK ngwaahịa ngwaahịa: HK0925). E guzobere otu ìgwè PEAKTOP na 1991, nke metụtara onyinye na ọrụ ụlọ.
Otú ọ dị ugbu a enyemaka-YUANHUA tumadi aku nnyocha na ịzụlite, mmepụta na ahịa nke ike oru oma AC submersible mgbapụta, anyanwụ DC mmiri mgbapụta, brushless DC submersible mgbapụta wdg Anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji crafts iyi, ubi Okirikiri ala, ubi mmiri, ụgbọ ala, akụrụngwa na-ekesa mmiri na-akpaghị aka, ngwaahịa ndị dị na mbara igwe (isi mmiri ịsa ahụ), tankị azụ aquarium, akụrụngwa ịsa ụkwụ, igwe oyi. Ọzọkwa anyị tinye ọhụrụ ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka igbapu mgbapụta maka ịsa igwe na RO mgbapụta maka mmiri nzacha.
Anyị ụlọ ọrụ nwetara ISO9001: 2008 quality management usoro asambodo, na nditịm-eso nke a manager usoro. Ngwaahịa ndị CCC, ETL, UL, CUL, CE / GS, ROHS, SAA wdg. Akwadoro nke kachasị nke ụwa. Anyị emeela mmekọrịta ogologo oge na mmekọrịta azụmahịa siri ike na ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ ụlọ.
Anyị nwere ụdị abụọ "PEAKTOP" na "YUANHUA" maka nfuli anyị nwere ike ịgba. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 nke ahụmịhe na ezigbo mma, anyị nwere aha dị elu na ụlọ ọrụ ahụ. Anyị na-na-kpọmkwem ngwaahịa soplaya nke submersible nfuli nke ọtụtụ ná mba ọzọ ahịa ụlọ ahịa. Mgbe niile na ụkpụrụ nke “Quality mbụ, Ahịa mbụ”, anyị na-na-mgbe niile kasị mma nzaghachi na akwụmụgwọ na mba ọzọ na n'ụlọ ahịa.
Iji nwee ike ịzụlite ahịa mba ụwa ọhụrụ, anyị sonyere na Canton Fair kwa afọ yana mgbe ụfọdụ na Global Sources Hong Kong Electronics Show. Weta ngwa ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na nkwukọrịta ihu na ihu na ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie na mba ofesi, na-ege ntị na echiche ndị ahịa na aro, na-aga n'ihu na-agbanwe ngwaahịa ndị ahụ. Ahịa afọ ojuju bụ nzube nke ọrụ anyị.
Na mgbakwunye, iji mee ka oge ọrụ na ọdịmma ndị ọrụ baa ọgaranya, ụlọ ọrụ anyị na-enye onyinye ụbọchị ọmụmụ na nnọkọ kwesịrị ekwesị na ụbọchị ọmụmụ nke onye ọ bụla. Anlọ ọrụ Yuanhua na-aga ebe ụfọdụ ndị njem nlegharị anya iji gaa 2-3 ugboro ugboro kwa afọ. Tupu Ememme Oge opupu ihe ubi, a na-eri nri abalị buru ibu na lọtrị kwa afọ, ọ bụkwa afọ ekele na mmemme nzaghachi kwa afọ iji gosipụta afọ niile gbasara ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 nke ahụmịhe na ezigbo mma, anyị nwere aha dị elu na ụlọ ọrụ ahụ.
- Quality mbụ, Ahịa mbụ